बहसमा जबज - २
नारायण ढकाल काठमाडाैं, १६ भदाै
अहिले नेकपाभित्र पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त बहस छ । तत्कालीन एमालेका नेता मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको भनिएको जनताको बहुदलीय जनवाद र तत्कालीन माओवादी केन्द्रको २१औं शताब्दिको जनवादलाई समेटेर ‘जनताको जनवाद’ बनाउने निर्णय भइसकेको छ । तर, अझै पनि दुबै सिद्धान्तबीच कुन सर्वश्रेष्ठ भन्ने मतअभिमत जारी छ । शिलापत्रले तत्कालीन समयमा विश्वलाई दृष्टिकोण दिएको भनिएको जबजका विषयमा वामपन्थी नेता तथा विश्लेषकहरुको विचार समेट्ने प्रयास गरेको छ, बहसमा जबज शीर्षकमा । प्रस्तुत छ, यसै शृंखलाको दाेस्राे विचार विश्लेषक नारायण ढकालको । (ढकालसँग शिलापत्र सहकर्मी सागर चन्दले कुराकनी गरेका हुन् । )सं।
सोभियत संघ र पूर्वी युरोपियन देशहरुको समाजवाद ढाँचा भत्किरहेको समयमा सार्वजनिक भएको दस्तावेज हो जनताको बहुदलिय जनवाद(जबज) । पूर्वी युरोप र सोभियत संघमा समाजवादी संरचना भत्किएपछि संसारभर कम्युनिष्टले भन्ने गरेको समाजवादको भयंकर ठूलो विरोध सुरु भयो । संसारभर कम्युनिस्ट आन्दोलन र कम्युनिस्ट मुभमेन्ट कमजोर भइरहेको समयमा जबज दस्तावेज आएको हो ।
मदन भण्डारी र उहाँका साथीहरुले जबज भन्ने दस्तावेज आउँदा मैले आधा समर्थन र आधा आलोचना गरेको हुँ । जबजमा आधारभूत प्रस्तावना वा विशेषताको रुपमा १४ वटा बुँदा छन् । ती १४ वटा विशेषता हामीले भन्ने गरेजस्तो अर्थात् कम्युनिस्टले भन्ने गरेको समाजवादी विशेषतासँग मिल्दैनन् ।
जबजमा समावेश गरिएका १४ वटा विशेषता बेलायतले अभ्यास गरिरहेको वेस्ट मिनिस्टर मोडलसँग मिल्छन् । त्यतिखेर अवस्था कस्तो थियो भने बेलायतमा पनि राजतन्त्र सहितको प्रजातन्त्र थियो र नेपालमा पनि राजतन्त्र थियो । वेस्ट मिनिस्टर मोडलले परिकल्पना गरेको प्रजातान्त्रिक स्थापना भन्दा बाहिर छैन जबज ।
पुरानो स्टालिनवादको धङधङीले गाँजेको समाजवादबाट हामी मुक्त हुनु नै थियो । तर, मुक्त हुनुको अर्थ, पुरानै पुँजीवादी प्रजातान्त्रिक प्रणाली सामु आत्मसर्मपण गर्नु थिएन् । जबजले स्टालिनवादको धङधङीबाट मुक्त त गर्यो । तर, पुँजीवादी प्रजातान्त्रिक प्रणालीसँग आत्मसर्मपण गर्यो ।
स्टालिनवादको धङधङीबाट मुक्त हुन खोज्नु मदन भण्डारीको साहस हो । ठूलो प्रयास हो । तर, त्यसमा उहाँले नयाँ बाटो पहिल्याउन नसक्नु भने कमजोरी हो । कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति गरेको धोका हो । समाजवादी लोकतन्त्रको बाटो पहिल्याउन नसक्नु मदन भण्डारीको कमजोरी हो ।
त्यसैले मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरिएको भनिएको जबज सरकारी मार्क्सवाद हो । अर्थात् पहिले नै प्रतिपादित सुत्रको आँखा चिम्लेर समर्थन गर्दै अन्धभक्त हुने परिपाटी सरकारी मार्क्सवाद हो । जबजले पनि मार्क्सवादका नाममा पुँजीवादी प्रजातन्त्रलाई अन्ध समर्थन गर्यो । यता, माओवादी विद्रोहले पनि संसारभर फेल भइसकेको क्रान्तिको बाटो अपनायो । त्यसैले मैले उनीहरुलाई त्यतिखेर नै जडसुत्रवादी भनिसकेको थिए ।
जबजको समस्या के हो भने, यसले इतिहासको असफलताबाट शिक्षा लिन सकेन् । जबजले बहसको परम्परा मास्दै बहसको वातावरण बिगारेको हो । इतिहासको ट्रेजेडी भन्नुपर्छ । रुसमा अक्टोबर क्रान्ति असफल भयो । स्टालिन जस्ता मान्छे पैदा भए । राष्ट्रवाद, समाजवाद र बहुदलको तर्क दिँदै जबजले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पश्चगामी बनाएको हो ।
जबजले नयाँ बाटो खोज्ने क्रममा हामीलाई गलत बाटोतर्फ निर्देशित गर्यो । यथार्थमा जबज पुँजीवादी प्रोजेक्ट थियो । तेस्रो विश्वमा प्रयोग गरिएका पुँजीवादी प्रोजेक्ट सबै असफल भएका छन् । नेपालमा पनि जबजको अवस्था असफल नै हो ।
समानता, न्यायको दृष्टिमा जबजले पुँजीवादी बाटो अंगिकार गर्यो । पुँजीवादले संसारभर समानता र न्यायामाथि अत्याचार गरेको छ । समानताका नाममा असमानता र न्यायको आवरणमा अन्याय गरेको कुरा त सर्वविदितै छ ।
पुँजीवादी परियोजना बनेको जबजले त पञ्चायभन्दा पछाडिको समयका मान्छे सिर्जना गर्यो । पञ्चायतले बनाएको भ्रष्ट र कुहिएको संरचनाभन्दा पछाडि लगेर कुहिएको समाज निर्माण गर्ने प्रयत्न गर्यो । अहिले आएका डोजराध्यक्ष हुन् या अलिक अगाडिका तस्कर सबै जबजका उत्पादन हुन् ।
जबज पच्छ्याउँदै आएको कोही पनि मान्छेमा कम्युनिस्ट चरित्र देखिँदैन् । माथिल्लो तहमा मात्रै होइन तल्लो तहमा पनि जबज पच्छ्याउनेहरुमा कम्युनिस्ट चरित्र देखिँदैन् । जुन सिद्धान्तले मान्छेको चरित्र नै कम्युनिस्ट बनाउन सकेन त्यो कसरी कम्युनिस्ट सिद्धान्त हुन सक्छ ?
जबजले पुरानो सत्तासँग मिल्ने र नयाँ वर्ग निर्माण गर्ने बाटो प्रसस्तै बनायो । अहिले हामीकहाँ देखिएका दलाल पुँजीपति, डोजराध्यक्ष, वा आईएनजीओ सञ्चालक यसैका उपज हुन् । पुरानो सत्तासँग संघर्ष गर्नुको सट्टा जबजले पुरानो सत्तासँग हात मिलाउने बाटो बनाइदियो ।
सामन्तवादी नेपाली समाजलाई चरम आर्थिक वर्ग विभेदतर्फ लैजान जबजको भयानक ठूलो योगदान छ ।
एमाले पंक्तिका साथीहरु जबजमा फुलस्टप र कमा पनि परिवर्तन गर्दैनौ भन्छन् । किनभने उनीहरुलाई यही सिद्धान्तले कम्युनिष्टको आवरण ओढाएको छ । कम्युनिष्टको आवरणमा पूँजीपति हुने बाटो खुल्ला गरेको छ । अहिले अर्को ठूलो शक्ति मिलेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) बनेको छ ।
एमालेमा मिल्न आएको अर्को शक्तिको बाटो पनि त्यही जबजकै हो । जबजको बाटो नभएको भए उ शान्तिपूर्ण पूँजीवादी चुनावी शैलीमा आउँथ्यो होला । २१ औँ शताब्दीको जनवादको नाम दिए पनि उसको सिद्धान्तको सार र जबजको सार उस्तै हो ।
चिन्तन र बहसको लागि अहिले संसारभर अध्याँरो समय हो । नयाँ विकल्पको खोजीमा अहिले विश्व समुदाय नै अलमलमा परेको छ । तर, यसो भन्दैमा हामी चिन्तित हुनुपर्छ भन्ने होईन । पुराना सबै कुरा खराब छैनन् ।
जबजले पनि पार्टीलाई स्टालिनवादी ढाँचाबाट मुक्त गराएको छ । यो विषयलाई हामी आज पनि ग्रहण गर्न सक्छौ । केन्द्रीयताको आधारमा बन्ने पार्टी अब काम छैन् । तर, जबजले केन्द्रीयता नै स्विकार गर्छ । आज त हामी संघियतामै गईसकेका छौँ ।
जबज मान्नेहरुको चिन्तनको एउटा उदाहरण : एमाले पार्टीले केही वर्ष अगाडि अमेरिका जाने दुईजना आफ्ना सांसदलाई कारबाही गर्यो । तर, बहुबिबाह गर्नेहरुलाई कारबाही गरेन् । अहिले पनि संसदमा नागरिकताको विषयमा कतिपय नेकपा सांसदहरु मनलाग्दी बोलिरहेका हुन्छन् । तिनलाई कारबाही गर्नुपर्दैन ?
जबजले विकास गरेको हाम्रो गलत चिन्तनको यो एउटा उदाहरण मात्रै हो । यस्ता प्रसस्तै उदाहरण तयार गर्न सकिन्छ ।
२०४६ को जनआन्दोलनको सफलतालाई सदुपयोग गर्ने । लोकतन्त्रको अभ्यासलाई सर्वोपरी मान्यता दिने । विमतीका स्वरलाई संस्थागत गर्ने । पार्टीभित्र विचार र सिद्धान्तलाई बढ्ता महत्व दिने भन्ने धारणा थियो तत्कालिन एमालेको । तर, जबज पार्टीको सिद्धान्त बनेसँगै यसलाई कार्यान्वयन गर्नेहरुले पनि यसको अपव्याख्या गर्दै यसलाई फेर्नै नहुने पुराण, गीता बनाईदिए ।
जबज सिद्धान्तले नेपाली अर्थतन्त्र सुधारमा नयाँ कुरा के ल्यायो त ? केही पनि ल्याएको छैन । भन्नलाई त हामी भन्छौ, आफ्नो गाउँ आफै बनाउ, वृद्धभत्ता । तर, पुँजीवादीहरुले यस्तो कार्यक्रम हामीलेभन्दा अगाडी उहिल्यै सुरु गरिसकेकाछन् । युवाहरुलाई जबजले सम्बोधन गरेन् ।
सिगों युवापुस्ता बाहिर छ । त्यहाँ उसले अपमानित ढंगले काम गरिरहनुपरेको छ । हिजो बम्बईमा चेली बेचिदाँ राष्ट्रिय अपमान भयो भन्ने, अनि आज यसरी लाखौँ युवा बेचिदा अपमान हुँदैन् ? यस्ता विषयमा जबजले पनि सम्बोधन गर्दैन र जबज मान्ने पार्टीले पनि सम्बोधन गरेको देखिँदैन् ।
भूमिसुधारका नाममा जबजले सामन्त र जमीनदारलाई क्षतिपूर्ति दिने कुरा ल्यायो । राष्ट्रको आर्थिक शक्ति विकास गर्नेतर्फ सचेत हुनुपर्ने समयमा जबजले विदेशी लगानी र प्रविधि भित्र्याउने तरिका सुझायो । जसको परिणाम अहिले वर्षेनि बढिरहेको व्यापार घाटाले देखाउँदैछ ।
निर्वाचन प्रणालीमा जाने भनेर सहमति जनाएको छ जबजले । तर, निर्वाचन प्रणालीमा हामीले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने त पूँजीपतिहरुसँग हो । पूँजीपतिसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा हामी पनि पूँजीपति जस्तै हुनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भयो । निर्वाचन प्रणालीको व्यस्थितीकरण गर्नतर्फ जबजले ख्याल गरेन् । निर्वाचन प्रणालीलाई सहज बनाउने, सरल बनाउनेतर्फ जबजले प्रयास नै गरेन् ।
मुलुक सुहाउँदो आर्थिक नीति बनाउन नसक्दा हामीले माफिया सिर्जना गर्यौँ । र, माफियातन्त्रमै मौलायो पार्टी पनि । यदि पार्टीसँग आफ्नो आर्थिक सिद्धान्त प्रष्ट हुन्थ्यो भने त माफियासँग लड्न सक्थ्यो होला नि ? अप्रष्ट र अपुरो सिद्धान्त वा नीतिले पार्टी, समाज र सिगों देशलाई नै माफियाहरुको नियन्त्रणमा पुर्यायो ।
जबजको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक पक्ष प्रगतिशील देखिँदैन । सांस्कृतिक पक्षमा पनि जबज प्रगतिशील छैन । मदन भण्डारीले इतिहासबाट पाठ सिकेर स्टालिन प्रवृतिबाट जोगिन खोजेका हुन् । तर, स्टालिन प्रवृतिबाट जोगिन खोजेका उनले मुलुकलाई दलाल पूँजीवादको धरापमा पारे ।
समाजवादीहरुले राजनीतिक, दार्शनिक, आर्थिक, सामाजिक विषयमा आफूले मान्दै आएका, वा मानेका सिद्धान्तमाथि एकपटक समीक्षा गर्न जरुरी छ । हामीले आज पनि समीक्षा गरेनौ भने हामी झन अधोगतिमा लाग्ने खतरा छ ।
अहिलेको सरकारले पच्छ्याईरको मार्ग पनि पुँजीवादसँग आत्मसर्मपण गर्ने बाटो नै हो । त्यही जबजको आत्मसर्मपणवादी बाटोमा हिडेको यो सरकार रेल र पानी जहाजका कुरा गर्छ । आफ्ना आवश्यकता र यथार्थभन्दा माथि हावामा उडेर पूँजीवादी सपना देखाउने काम जबजले गर्यो । यसको छायाँ अहिलको सरकारमा देखिन्छ ।
पुँजीवाद कम्युनिस्टको मार्ग होइन । तर, पुँजीवादको पक्षपोषण गर्नेगरी जबज र यो सरकार किन लागि परेका छन् ? कम्युनिस्टको आवरणमा जबज पुँजीवादको खेताला बनेको त होइन ?
बहसमा जबज - १ : जबज कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रको कार्यक्रम नै होइन
प्रकाशित मिति: सोमबार, भदौ १६, २०७६, १०:५८:००
#जबज बहस ##जबज